Abaaraha Soo Noq Noqonaya iyo Baahida Loo Qabo Kaluunmeysi la joogteeyo (hoos ka akhriso) | Hubsad News
Abaaraha Soo Noq Noqonaya iyo Baahida Loo Qabo Kaluunmeysi la joogteeyo (hoos ka akhriso)
March 31, 2018 - Written by weryayaasha shabakada hubsad
Hargeysa (Hubsadnews): Abaarta soo noqnoqanaysa waxay dalbanaysaa horumarinta kalluumeysiga Somaliland
Somaliland waxay la kulantaa caqabado badan, laakiin waxay kaloo leedahay kheyraad ballaadhan oo aan daboolka laga qaadin haba yaraate, haugu horeeyo biyaha ku xeeran Somaliland. Sannadihii ugu dambeeyay, Somaliland waxay la kulantay ciriiri xaga roobka ah oo ay sababtay isbedelka cimilada aduunka. Tani waxay keentay abaaro ba’an iyo khasaaro weyn oo ku yimid xoolaha – kuwaas oo ah laf dhabarka dhaqaalaha iyo hab-nololeedka gobolka. Natiijada ay abaartaasi keentayna waa cunto yari, macaluul iyo sidoo kale khasaare dhaqaale qoys iyo qaranba. Illa cunteedyo kala duwan iyo xaqiijinta horumar dhaqaale iyada oo la adeegsanayo khayraadka aan laga faa’iidaysan ayaa ah qorshe muhiim ah oo lagaga samato bixi karo xaaladan. Sidaa daraadeed, isticmaalka khayraadka kalluunka ee ku duugan biyaha ku hareeraysan Somaliland waxay fure aad u muhiim u tahay la dagaalanka dhibaatooyinka hadda lagu jiro iyo abuurista mustaqbal wanaagsan oo ay Somaliland yeelato.
Hay’ada FairFishing waxay ka qayqaadataa koboca Kalluumaysiga Mid ka mid ah dadaalada lagu abuurayo dakhliga iyo fursadaha shaqo ee loo marayo isticmaalka khayraadka badda ayaa waxaa bilawday hay’adda aan dawliga iyo faa’idoonka midna ahayn ee FairFishing. Guddiga hay’adani wuxuu ka kooban yahay mutadawaciin Danish iyo Somaali ah oo ka shaqeeya dalka Denmark. Dhammaan shaqooyinka ay guddiga fulintu sameeyeen waa ikhtiyaari aanay waxba ku qaadan, abaalmarintooduna waxa weeye dareenka guusha ee ku salaysan in ay caawimo muuqata oo noloshooda wax ka badalaysa gaadhsiinayaan bulshada kalluumeysiga ee Somaliland. Fikradda FairFishing oo bilowday sannadkii 2011 midhihii u horeeyey dhalay sannadkii 2013 markii Xarunta Ganacsiga Fairfishing laga furay Magaalo xeebedka Berbera.
Tan iyo markii la furay xarunta iyo dukaanka yar ee iibiya qalabka kalluumeysiga FairFishing waxay kalluumeysiga maxalliga ka kaabayeen iibsiga baraf tayo sare leh oo jaban, kaydinta (qaboojinta)kalluunka oo aan hore loo hayn, farsamaynta kalluunka oo casri ah iyo iibsiga qalabka kalluumeysiga oo casri ah, iyada kalluumaysataduna ay iskaashi dhaw la leeyihiin FairFishing. Sidaas awgeed, FairFishing waxay gacan ka geysaneysaa kobcinta kalluumeysiga iyada oo ka taageeraysa kalluumeysatada dalka iyo dawlada Somalilandba kaabayaasha dhaqaalaha iyo iyadoo yareeynaysa kharashaadka wax soo saarkoodaa iyo xumaadka kalluunka marka la soo qabto ila inta la suuqgaynaayo. Si kale haddii loo dhigo,iskaashigu wuxu kordhin karaa tayada iyo tirada kalluunka la dabto taas oo una faa’iido badan dhamman cidkasta oo ku hawlan Kalluumaysiga. Afartii sano ee la soo dhaafey waxay soo kordhiyeen horumarin cajiib ah oo xaga kalluumeysiga. Dabashadu aad bay u sarreysa, dad aad u badanina si toos ah ayey uga shaqo galeen kalluumeysiga iyo qaybaha la xiriira.
Doonyo cusub, shaqooyin cusub iyo 900ton oo kalluun ah Sanadkii 2017, wadar dhan 900tan oo kalluun ah ayaa laga diiwaangeliyey Xarunta FairFishing ee Berbera. 900tan ee kalluunka ah waxa lagu iibsaday laguna quutay suuqyada maxaliga ah ee dalka sida Hargeisa, Berbera, Burco, Borama iwm. Kalluunkaasi Suuqyada maxaliga ah ee dalka waxa uu ka abuuray dhaqdhaqaaq dhaqaale oo gaadhaya ilaa 4.000.000 USD kaas oo ah faa’iido gaadhay dhammaan cidkasta oo ka shaqaynaysa ama ku hawlan silsiladda qiimaha kalluunka. Hadaad Berbera eegto korodhka doonyaha cusubi waxay gaadhayaan inadii 2017 qiyaastii ilaa 20 doonyood iyo weliba qiyaastii. 80 kaluumeyste cusub oo firfircoon. Mararka qaar waxaa la sheegaa in hal shaqo oo badda laga abuuraa uu keenayo ila afar shaqooyin oo beriga ah. Haddii aan halbeegaa ku qiyaasno magaalada Berbera, markaa 400 oo shaqooyin ah baa laga abuuray silsiladda qiimaha kalluunka sanadkii 2017.
Ballaarinta fikradda FairFishing iyada oo loo marayo deeqda EU Sannadihii ugu horreeyay FairFishing waxay ku tiirsanayeen kaliya deeq-qalabeed, deeq-lacageedka gaarka ah iyo inta badan shaqada mutadawacnimo. Laakiin waaxda kalluumeysiga ayaa billaabay inuu kordho maalinba maalinta ka dambaysa. Sanadkii 2016, Midowga Yurub wuxuu aqoonsaday fikradda FairFishing, wuxuuna go’aansaday inuu maalgaliyo mashruuca oo uu barnaamij ka dhigo kuna fidiyo dhowr goobood oo ku yaalla Geeska Afrika. Sidaa awgeed, xoghayn yar ayaa maamusha hawlaha guud ee Kobanheegan, iyadoo dhawr ka mid ah shaqaalaha maxaliga ah ee Berbera ay maamulaan hawl maalmeedka iyo hirgelinta mashruuca. Xarunta FairFishing ee Berbera waa Xarunta ugu saraysa ee Barnaamijka Midowga Yurub, iyo beelaha kale ee ku yaala Somaliland waxay hadda ka faa’iideysanayaan khibradaha ay sameeyeen bulshada kalluumeysiga ee Berbera.
Iyadoo la raacayo ujeedada guud ee FairFishing, ujeeddada barnaamijka ay maalgelinayso EU-du waa in la siiyo fursado cunto nafaqo leh, ganacsi, dakhliga iyo fursado shaqo dadka degaanka ee maxalliga ah, iyo sidoo kale in la abuuro horumar dhaqaale iyada oo loo marayo dhaqaalaha ku salaysan kalluumeysiga ilaa barnaamijku dhammaado December 2018. Illaa dabayaaqadii 2017, barnaamijyada tababarka farsamada kalluumeysiga ee badda ayaa la qabtay si loo hagaajiyo xirfadaha kalluumaysi ee dhalinyarada iyo la abuuro kalluunlayaal cusub oo dhalinyaro ah.
Mashaariicda FairFishing ee Saylac, Buluhar, Burco, Boorama and Laasqorey Bishii Sebtembar 2017, FairFishing waxay si rasmi ah uga furtay xarun kalluumeysi oo cusub magaalo xeebeeda Saylac. Xarunta Saylac waxay bixisaa imika baraf jaban, kaydin kalluun oo qabow iyo qalabka kalluumeysiga oo ay faa’idaystaan kalluumaysatada maxaliga ah. Ballaarinta way socotaa. Xarun kalluumeysi oo yar oo ku taal Buuhaar iyo suuq kalluun oo leh baraf soo saar iyo qaboojin oo ku yaal Burco ayaa la dhisay. Labadaba waxaa la rajeynayaa in ay furmaan guga 2018. Berbera, FairFishing waxay qalabaynaysaa geerashkii doonyaha kalluumaysiga qolofkooda iyo mashiinkoodaba lagu dayac tirayey. Halkan wada-hawlgalayaasha Fairfishing waxay ka heli doonaan fursad loogu dayactiro doonyaha, mashiinnada iyo qalabka dayactirka. Awoodda farsamada iyo joogtaynta qaybta kalluumeysiga ayaa la kobci doonta geerash si fiican u shaqaynaya oo laga helo dekeda kalluunka ee Berbera. Intaa waxaa dheer, diyaarinta iyo wadaxaajoodyada suuqa kalluunka ee Boorama iyo xarun kalluumeysi oo ku taala Laasqorey oo iyana hadda socda.
Aragtida iyo himilada FairFishing Aragtida FairFishing waa fikir ku binaysan abuurista silsilad kalluumaysi oo waarta. Waa fikir oo kulminaaya wax soo saarka kalluumaysiga iyo suuqa lagu gadanayo kalluunka. Waa fikir ku salaysan sidii cuntada nafaqa leh looga dhigi laha mid la heli karo sido kalena abuuraya shaqooyin iyo dhaqaale. Ujeedadu waa in la sii wanaajiyo taageerada silsiladda qiimaha iyo gaar ahaan baahida korodhka iyo awooda suuqa. Waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiqo in dhamman qorshayaasha iyo waxqabadyada lagala tashaday dawlada Somaliland gaar ahaan Wasaarada xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Somaliland. Waxa uu qaranka Somaliland mudnaanta koowaad siinayaa si loo bilaabo ganacsi kalluumeysi wax soo saar leh oo laga yaabo inuu gacan ka geysto sugnaanta cuntada iyo fursadaha dakhliga ee dadka Somaliland, waxaana ay diyaar u nahay in laga faa’iideysto fursadaha laysku haleyn karo ee kalluumeysiga Somaliland. Iyadoo lala kaashanayo Wasaaradda waa mabda’a muhiimka ah ee FairFishing in kor loo qaado ka qaybgalka bulshada iyo lahaanshaha. Dhammaan ficilada waxaa loola jeedaa in laga qaybgaliyo bulshada kalluumeysiga si loo helo kalluumaysi sii jiraya oo ay ka faa’iideysan karaan kalluumaysatada, kalluumeeyayaasha iyo bulshada guud ahaan.
Maareynta caqabada abaarta Iyadoo abaarta jirta ee hadda soo noqnoqatay ay dishay dilina doonto xoolaha nool haddii aan EEBE inaga soo jabin dadkana ay noloshooda ay hadaba khatar ku jirto waxa daruuri ah in loo soo jeesto oo la horumariyo wax soo saarka kalluumeysiga Somaliland. Waxaa muhiim ah in dhammaan daneeyayaasha – Wasaaradaha, NGO-yada, Kalluumeysatada iyo maalqashadayaasha caalimiga iyo kuwa maxaligaahiba ay si wada jir ah u wada shaqeeyaan si ay u horumariyaan kalluumeysiga. Arintani waxay shardi u tahay in la helo kalluumeysi joogta ah oo lagula soo bixi karo kumanaan tan oo kalluun ah taas oo gacan ka geysaneysan karta xaqiijinta sugnaanta cuntada, abuuritaanka ganacsiga iyo shaqo abuur badan oo gacan ka geysta horumarka dhaqaale ee Somaliland.